Akaunti yevatengesi yepasi rese uye yekubhadhara muripo
Yepasi rose bhizinesi account accounting uye nyika dze106 dzine 150+ Nzira dzekubhadhara mu170 + nyika
Fintech mutengesi maakaunzi
Crypto mutengesi maakaunzi
Kiredhiti Kadhi Kugadziriswa
Kubhadhara Kwemweya Taura nesu
Chizvarwa chitsva chemhinduro dzekubhadhara
Isu tinopa kubvunza kune yevatengesi account, Kubhadhara gateway, fintech mutengesi account, fintech yekubhadhara gedhi, crypto mutengesi account, mutengesi maakaundi emabhizimusi madiki, yekubhadhara gateway yemabhizimusi madiki, Kiredhiti Kadhi Kugadziriswa, mhinduro dzevatengesi maakaunzi, mubhadharo wegedhi rekubatanidza, mutengesi account account, offshore account yevatengesi, yekumahombekombe yekubhadharisa gedhi, yekumahombekombe fintech mutengesi account, mubhadharo account mutengesi, dijitari yekubhadhara mhinduro, kubatanidza ngoro yekutengesa, ecommerce kusangana, ecommerce kusangana kune yako webhusaiti, epasi rose Bhizinesi Account Akaunti kuvhura masevhisi uye zvakare mhinduro yeakanyanya njodzi mutengesi account.
Global management management
Real-nguva Njodzi manejimendi
Yakazara PCI DSS - PCI Dziviriro dhata standard inoenderana
Yakanakisisa Kubhadhara Solution Vanopa
Vakanakisa vatengesi vevashandisi | Vakanakisa vatengesi account account vanopa | Yakanakisa yekubhadhara magedhi evanopa vanopa | Vakanakisa vanopa fintech sevhisi | Vakanakisa vadhijitari ekubhadhara masevhisi | Yakanakisa forex mutengesi account account vanopa | Yakanakisa kumahombekombe mutengesi account account vanopa | Yakanakisa yakanyanya njodzi mutengesi account account vanopa
Kubhadhara Gateway Services.
Dhijitari Kubhadhara Sevhisi Vanopa.
Forex Merchant Akaunti Services.
Offshore Merchant Akaunti Services.
Yakakwira Njodzi Merchant Akaunti Services.
Isu tinopa mabhizinesi nemhinduro dzakanakisa.
Zvepasi rose Chiitiko
Varairidzi vedu vane ruzivo uye epasirose ekubhadhara mhinduro.
Kurudziro yedu yakavakirwa pane bhizinesi dhizaini uye kuwedzera kwenyika.
Zvepamutemo uye zvakachengeteka semitemo yemabhizinesi ako.
Maitiro Ekubhadhara Akawanda, 150+ Maitiro ekubhadhara kubva ku170+ nyika.
Dhijitari yekubhadhara mhinduro
Kiredhiti kadhi kugadzirisa pamwe nekugamuchira kuburikidza nePayPal uye mamwe ma e-wallets.
Kana iwe uchida rutsigiro, timu yedu inogona kusanganisa iyo yekubhadhara system kune yako ecommerce bhizinesi.
Global Kubhadhara Services
Tarisa runyorwa rwemabhizimusi muZVINHU RISK zvikamu zvakatsigirwa kuGlobal Payment System.
YEMAHARA RISIKI LIST
Merchant account yebhizinesi rako, yakafanana, bhizinesi rebhangi account kubvumidza yako bhizinesi kuumba ingave bhizinesi diki kana makuru makambani ku gamuchira kubhadhara kwemagetsi yezvinhu zvako kana masevhisi. Isu tinopa kubvunza kumabhizinesi, mushure mekunzwisisa zvinangwa zvavo zvebhizinesi kana pasirese uye nekuzvibatanidza navo nevatengesi ve account account. Akaundi yevatengesi inobatsira bhizinesi rako kutanga kugamuchira makadhi echikwereti kubhadhara uye / kana akati wandei akasiyana marudzi emagetsi kubhadhara.
Merchant account masevhisi anouya nemari yekuwedzera yekugadzirisa, nokudaro, zvakakosha kusarudza zvine hungwaru nerubatsiro rwevanopa mazano kune avo vane ruzivo.
Kusarudza yakakodzera Merchant account kambani kune rako bhizinesi kwakanyanya kukosha kudzivirira matambudziko asingatarisirwe uye yako account yemutengesi inokwanisa kukwanisa kugadzirisa rako bhizinesi kutengeserana uye online bhizinesi kukura.
● Bhizinesi account yevatengesi
● Merchant account yeecommerce
● Fintech account yemutengesi
● Crypto mutengesi maakaundi
● Offshore mutengesi account
● Akaundi yevatengesi yepasi rose
Isu tinobatsira kudzikisa mutengesi account account uye kiredhiti kadhi yekugadzirisa fizi
Ngatibatsirei iwe nezvakatengwa maakaunzi evatengesi, zvakachipa vatengesi veakaunzi maakaunzi kubvunza kunopihwa nepamusoro vatengesi veakaundi account
Nyorera Chikwata Chevatengesi
Yakachipa yekubhadhara gedhi kune rako bhizinesi ku gamuchira debit uye kiredhiti kadhi yechitoro chako chepamhepo. Zvichienderana nezvinodiwa nebhizinesi rako, isu tinogona kupa zano rinoshanda uye rakachipa uye yako yepasirose kubhadhara kune uye izvo zvinogona kukodzera bhizinesi rako chimiro zvirinani pane yechinyakare yekubhadhara gedhi.
Isu tanga tiri kubatanidza vatengi kune akakodzera akakodzera kubhadhara masuo evanopa.
Chinangwa chedu ndechekubatsira mabhizinesi kuchengetedza "mutengo, kukura uye kuva vakagadzirira mune ramangwana", yedu yekubhadhara yekugedhi kubvunza inoitirwa kutanga, mabhizinesi madiki, uye makambani.
Kubatanidza iyo chaiyo yekubhadhara gedhi mupi nekukubatsira iwe kusarudza yakakwana yekubhadhara gedhi mhinduro kune rako bhizinesi:
● Kubhadhara Gateway yeecommerce
● Crypto Kubhadhara Gateway
● Offshore Kubhadhara Gateway
Kuti ikubatsire kuchengetedza mutengo!
Ngatibatsirei iwe nezvakatengwa kubhadhara gateway, zvakachipa mubhadharo wevatariri vegedhi inotsigirwa ne top mubhadharo wegedhi revanopa mazano
Nyorera Chipo Chekubhadhara
Simba reFINTECH kune rako bhizinesi, gamuchira kubhadharwa kwebhizinesi rako kubva kwakasiyana masosi senge, makadhi echikwereti, PayPal, STRIPE, SKRILL, kusanganisira kubhadhara kubva kubhizimusi repamhepo, maE-wallets, kuendeswa kwebhangi, mari yakabhadharwa kune dzimwe nyika, kubhadhara kwenzvimbo kunoitwa kunze kwenyika, crypto mari uye kubhadhara kunoitwa kuburikidza nevashandisi venhare.
Fintech Merchant account inogona kugamuchira mubhadharo kubva:
● Kubhenga paInternet.
● Kubhangi kuchinjirwa.
● Mari yakabhadharwa yekutengesa, kune dzimwe nyika.
● Kubhadhara munharaunda yakagadzirwa nevatengi kunze.
● Crypto mari inobhadhara.
Nyorera iyo Fintech Akaunti
Rugare rwepfungwa. Takanetseka, ngatibatsirei bhizinesi rako kuwana akanakisa crypto mutengesi account, zvakare uzive se, bitcoin mutengesi account
Mitengo isingadhuri. Chinangwa chedu ndechekutsvaga mupi weakaundi yako bitcoin mutengesi webhizinesi rako.
Kurumidza Kubvumidzwa. Kubvumidzwa nekukurumidza kunoreva kuti vatengi vako vanogona kutanga kubhadhara nekukurumidza.
Yakakwira Vhoriyamu Kugadziriswa. Yakakwira vhoriyamu, bitcoin vatengesi maakaunzi anokupa iwe ekugadzirisa masimba iwe aunoda kuti ukure bhizinesi rako.
Chargeback Kudzivirira. Mira kudzoreredza zvikwereti zvekuchengetedza yako kutengesa uye kurasikirwa. Rwisa kubhadharisa, kuti iwe ugone kukunda.
Maturusi ekudzivirira kubiridzira. Gadza padivi mirairo isingabvunzwe yekudzokorora uye Mira hunyengeri hwekutengesa.
Yakanakisa Crypto kubhadhara mhinduro kune rako bhizinesi.
Ngatibatsirei iwe nezvakatengwa crypto maakaunzi, zvakachipa crypto mutengesi maakaunzi, zvakachipa crypto yekubhadhara gedhi, zvakachipa crypto mubhadharo gedhi vanopa inopihwa nemutengo unodhura crypto mubhadharo gedhi vanopa mazano
Nyorera yeCrypto Merchant Akaunti
Kubhadhara gedhi kusangana kana mutengesi account kusangana
Maitiro ekubatanidza ekugadzirisa kiredhiti kadhi uchishandisa mubhadharo gedhi rebhizimusi rako repamhepo rinogona kukuvhundutsa kwauri asi kwatiri ibasa remazuva ese, kune rako bhizinesi, kana iwe uchida kuti webhusaiti yako igamuchire kubhadhara kwepamhepo kana pasirese, timu yedu inogona kutsigira zita remazita. Sanganisa muripo wegedhi kana account yemutengesi kune yako webhusaiti kana ecommerce chitoro chekuchengetedzwa kwekubhadhara mubhadharo.
Our software software, Inogona kukubatsira iwe nekubatanidzwa kweyekubhadhara gedhi uye yevatengesi account, kuitira kuti, iwe ugone kutanga kugamuchira mari online uye kubva kune vekunze vatengi. Maitiro ekubatanidza haasi nyore ndosaka tichitsigira neSeamless Kubatanidzwa pa ine mari dzinodhura.
Chinhu chakanyanya kukosha kune chero bhizinesi kushoma kwengoro kusiiwa uye kutenga zvinobudirira, isu tinokubatsira iwe gamuchirai makadhi echikwereti, e-zvikwama, kana ngazvive zvakadaro cryptocurrencies, Ingori nemhinduro yakanakisa mumusika, zvichiita kuti ruzivo rwekutenga rwemutengi wako rwunakidze. Yedu yekuvandudza timu yakasimbiswa neese anozivikanwa evatengesi maakaunzi uye ekubhadhara masuo.
Yakagadzirwa nekukwana kune rako bhizinesi! Musono Kusanganiswa ...
Ngatitaurei tikubatsire iwe Nezvinokwanisika Kubhadhara Gedhi Kubatanidzwa, Yakachipa Merchant Account Kubatanidzwa, Yakachipa Ecommerce kusangana, Yakachipa Ngoro yekutengera Kubatanidza, Yakachipa Ecommerce Kubatanidzwa kweWebhusaiti, Yakachipa Kubhadhara gedhi rekubatanidza kambani uye Inotengeka kambani yekutengesa account yekubatanidza.
Yemahara kumakambani akaiswa kuburikidza nesu - Nyoresa Kambani.
Mari dzinosanganisira kubvunza mhinduro yekubhadhara uye rutsigiro negadziriro yekubhadhara gedhi kana account yevatengesi kana account yevatengesi ye crypto kana fintech account yevatengesi kana Kiredhiti Kadhi Kugadziriswa kana yakanyanya njodzi account yevatengesi iyo yakanakira zviitiko zvako zvebhizinesi.
MERCHANT ACCOUNT ODHA KUMBIRA FOMU
Mutengesi Accout Service:
Mutengesi Akaundi Akaundi
Yemahara kumakambani akaiswa kuburikidza nesu
150+ Maitiro ekubhadhara
Gamuchira muripo kubva ku169+ Nyika
Zero Set-up mubhadharo webhizinesi rako
Hapana mari yemwedzi yekugamuchira mari
Mari inowanikwa kubva mukutengesa kwezvinhu kana masevhisi kana pasirese inogona kubviswa kuburikidza nekuchinjisa kweBhangi, International VISA / MC makadhi kana kunyangwe PayPal.
Merchant Akaundi Mari
Inodikanwa ruzivo kuti upedze chikumbiro
Takugashira iwe kubvunza nekuda kwekuvanzika kwedu clause, isu hatitore mubhadharo mune yekutanga muenzaniso uye zvakare tinoda kupa yakagadziriswa mhinduro yakaenderana nezvinodiwa zvako.
Isu tichaonana newe uye nekukurukura zvaunoda kutanga uye tobva tagamuchira kubhadharwa.
Ngatinzwisisei bhizinesi dzenyu zvinangwa kutanga uye zvichibva pane izvo, ipapo, tipe yakagadziriswa mhinduro.
Wapedza zvakakwana matanho ese, isu tichaonana newe tikurukure.
Enda kuOrodha Dhibhodhi
Mabhizimusi madiki uye Start-ups
"Isu taivewo kutanga uye tinonzwisisa zvinetswa, zvikanganiso zvisingaitwe uye kuronga zviri nani ramangwana."
Isu tinotarisira zvakanyanya mabhizinesi madiki uye kutanga, mukupa yakanakisa kukosha chirevo icho chinopa kwenguva yakareba mutengo wekuchengetedza, izvo zvinovapa kutanga nekukurumidza kunodiwa, kuitira kuti, iwe utange kugamuchira mabhadharo nekukurumidza kuwana kubvumidzwa munguva yanhasi apo zvakati omei kubvumidzwa nemabhangi, masangano emari uye vamiririri ekugadziriswa kwemakadhi echikwereti uye dzimwe nzira, isu tine ruzivo nekuratidza vanopfuura 10000+ vatengi vanobva kutenderera pasirese vaive bhizinesi idzva kana diki bhizinesi kamwe, chinangwa chako bhizinesi ndere kukurumidza kutanga kugadzirisa muripo isu tinogona kukurudzira uye zvakare kukubatsira iwe kubatanidza iyo yevatengesi account kana yekubhadhara nzira pawebhusaiti yako, kana iwe uchida pane imwezve mari kuti iwe utange kutora kubhadhara kwezvinhu zvako uye masevhisi.
Isu tinopa kubvunza kwe:
● Merchant account yemabhizimusi madiki uye kutanga
● Kiredhiti kadhi kugadziriswa kwemabhizinesi madiki uye kutanga
● Fintech mutengesi maakaundi emabhizimusi madiki uye ekutanga
● Kubhadhara Gateway kumabhizinesi madiki uye kutanga
● Ecommerce mutengesi maakaundi emabhizimusi madiki uye ekutanga
● Fintech Kubhadhara Gateway yemabhizinesi madiki uye kutanga
Uyezve tarisa edu mamwe kukosha-akawedzera masevhisi, ataurwa pazasi.
Tsigiro yebhizinesi diki
Inoda Kuziva - Merchant Akaunti
Kubvunza kwekubhadhara mubhadharo wemabhizimusi akataurwa pazasi:
Yakakwira Njodzi mabhizinesi.
Offshore mabhizinesi anoshanda.
Makambani mazhinji ekushambadzira.
Isu tinokubatsira iwe mukukutorera iwe mutengesi account / yekubhadhara gedhi, kuitira kuti, rako bhizinesi riite makadhi echikwereti, e-wallets uye cryptocurrencies.
Mashoma maficha eanobhadhara ekugadzirisa vanopa:
Insights Kushandiswa kwe data chaiyo-nguva
Hapasisina mapepa kana mari yekushamisika uye maitiro ekuteerera kwePCI.
Up-to-date kuwedzera kukwikwidza nemaitiro epasirese.
Inogamuchira kubhadhara mumaawa mashoma.
Zvese zvimhosva zvinoratidzwa panzvimbo imwechete, kusanganisira, mhando dzekubhadhara, mwero wenjodzi, nyika, uye mari.
Dashboard ine analytic maturusi.
Tengesa mavhoriyamu ane chaiyo terminal rutsigiro.
Kune vashoma ma processor vanorega bhizinesi kubvisa mari yakawanikwa kuburikidza
Isu tinobhadharisa Service sevhisi yekubvunzana kwekugadzirisa kiredhiti kadhi kana imwe nzira yekubhadhara yekubhadhara zvinoenderana nezvaunoda.
Isu tinoedza kupa vakanakisa vanopa masevhisi uye kubhadhara kwepasirese, vasingabhadharise:
Imwe Nguva Yekuisa-kumusoro muripo.
Nhare uye Mahwendefa ekubhadhara mari.
Disiki kune masevhisi akapihwa
Hatitsigire kana kupa kubvunza kune MERCHANT ACCOUNT kana PAYMENT Gateway kune avo vataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi:
· Payment Solutions hazvipi zvinopihwa kune Vatengesi kana vagoveri vezvombo uye zvombo
· Kubhadhara services hazvina kupihwa kweTechnical kuongororwa kana maindasitiri espionage eVoIP.
· Kubhadhara Gedhi Kubatanidzwa hazvina kupihwa chero zviitwa zvisiri pamutemo kana zvematsotsi.
· Merchant account kusangana haazi emabhizinesi anotengesa muGenetic zvinhu.
· Offshore mutengesi account haina kupihwa kune bhizinesi rekutengeserana mune zvine ngozi kana zvine njodzi zvombo zvehupenyu kana zvombo zvenyukireya.
· Offshore fintech account yemutengesi hazviwanikwe kumakambani anoita mukutengesa, kuchengetedza, kana kufambisa nhengo dzeVanhu.
· Yekutengesa ngoro kusangana haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
· Ecommerce kusangana kwewebhusaiti haisi yezvitendero zvechitendero uye masangano avo.
· Yakakwira njodzi account yevatengesi haina kupihwa kune bhizinesi rekuita mune Zvinonyadzisira.
· Hatitsigire account yepasi rose yekubhadhara bhizinesi kutsigira MLM chimiro.
· Global Kubhadhara Services haisi kuwanikwa kune mabhizinesi anotengesa zvigadzirwa zvemishonga.
“Chiziviso Chakakosha : Mamirioni Vagadziri vanotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza KYC zvinyorwa zvevapi vebasa rekubhadhara asi panguva imwechete isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurasikirwa kana kukuvara kunogona kumuka kubva kumasevhisi anopiwa nevapi vebasa rekubhadhara kana pasi rese. Isu tinongoita mazano edu; kushingairira ibasa revatengi.
Mamwe maBusiness services
(Isu tinofukidza Nyika dze106)
Kunze kwekubvunzana kwekusarudza iyo kurudyi kubhadhara mubatidzani, isu tinotsigirawo ne mubhadharo wegedhi kubatanidzwa kwebhizinesi uye isu tine software yekambani iyo inopa inodhura webhu kuvandudza, CRM yemabhizinesi, isu tinopawo akasiyana siyana ebhizinesi kubvunza, chaiwo manhamba, manpower kubvunza uye yekufambisa mabasa. Saka, a yakazara bhizinesi mhinduro in Nyika dze106.
Tine makore echiitiko kudivi redu nepasirese kubatsira vanhu uye mabhizinesi.
Isu tinotsigira vatengi vedu nenzira inopfuura chero imwechete sevhisi webasa kana International inogona nekuda kwechiitiko chedu chakawanikwa kuburikidza nekudyara kwedu muhukama.
Isu tinopa yakachipa pashiri kunyoreswa kwekambani inopiwa neakanakisa maakaundendi
yedu ine ruzivo bhizinesi rekunze timu inokwanisa kukubatsira kunyoresa kambani yekumahombekombe.
Corporate Bank Akaundi
Isu tinopa vatengi ku vhura offshore account account uye vatengi vepasi rese kuvhura account yebhangi yebhizinesi.
HR Kubvunza uye kuhaya rutsigiro. Yedu kambani yevashandi inogona kubatsira iwe kuzadza nzvimbo dzako. Shandisa yedu yemahara basa portal kutumira nzvimbo.
CRM Software kubvunza kubatsira mabhizinesi ane mahara CRM ebhizinesi ravo. Isu tinozadzisa tsika CRM kusangana, zvichibva pane zvinodiwa nebhizinesi.
Chii chekuwedzera kubva / uye chinoda kutengeka chaiyo bhizinesi kero kune rako bhizinesi kana kunzvimbo 65 dzenyika dzese, bata timu yedu.
VoIP masevhisi, kusanganisira Virtual nhamba uye nyika zana nemaguta 100. Nechizvarwa chitsva cheVoIP.
Unoda a bhizinesi rakagadzirira izvo zviri kutengeswa kuti zvikubatsire kukanda kutanga, kunowanikwa nekukasira kwakakodzera
Rutsigiro rwese rwaunoda kutanga bhizinesi idzva, isu tinopa ese emazuva ano maturusi ebhizinesi.
Tanga Bhizinesi Nyowani
Yedu Software Kambani inobatsira mabhizinesi ane shungu dzekutora pamakwikwi avo neazvino matekinoroji mukuvandudza webhu, Nharembozha App kuvandudza kana webhusaiti kuvandudza uye chero rudzi rwetsika software kuvandudza.
Isu tinopa zviyero zvepasi rose zve kuvandudza webhusaiti, Software kuvandudza, E-commerce kuvandudza uye nharembozha App kuvandudza.
Kutungamira kwehunyanzvi uye tsigira yeMerchant Akaunti uye Yekubhadhara Gateway
Kumbira Kubvunzana Mahara yeMerchant Akaunti uye Yekubhadhara Gateway